Mhuri kugovana iCloud kuchengetedza neIOS 11 | IPhone nhau
Jesu anotema | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kuvhurwa kweIOS 11 kwareva neApple kubheja kukuru ICloud uye nzira yake gadzirisa mafaira. Pakati pezvimwe zvinhu zvitsva zvakatoburitswa muchinyorwa pa iOS 11iCloud yaita kunatsurudzwa kwakakosha, ichipa sevhisi iyi mashandisiro ekushandisa kumushandisi uye ichitibvumidza kuwana zvakawanda kubva pamidziyo yedu, kunyanya kana tiine iPad.
Imwe yeaya akakurumbira matsva anga ari mukana we share iCloud chengetedzo neboka rako «Mumhuri«. Kubva ikozvino zvichienda mberi, iine iOS 11, iyo yekuchengetedza iyo yatinotenga kubva kuICloud inogona kugoverwa zvakasununguka nemumwe nemumwe wavo.
Apple's iCloud sevhisi inobvumidza iwe kuchengeta yako yese ruzivo kubva pachigadzirwa chedu mugore, kuita kuti iwanikwe zvese kubva paICloud.com webhu uye kubva kune chero chinhu chakanyoreswa neaccount yedu. Tinogona kuchengeta edu ese mapikicha, Tsamba, vanobata, makarenda uye zviyeuchidzo, manotsi, data rehutano, keychain, backups, iCloud Drive, data kubva kune echitatu-bato kunyorera uye zvimwe zvakawanda.
1 ICloud zvirongwa zvekuchengetedza
2 Nzira yekugovana yako iCloud yekuchengetera neMhuri boka?
3 Nzira yekumira kugovana yako iCloud yekuchengetedza?
ICloud zvirongwa zvekuchengetedza
Zvirongwa zvazvino, panguva ino chinyorwa chaburitswa, zvinotevera:
Iyo yakasarudzika uye yemahara chirongwa iri 5GB kuchengetedza. Iri zano haribvumidze sarudzo yekugovana naro neboka rako reEn Familia.
Inotevera yaizove 50GB, ye chete € 0,99 pamwedzi Uye senge yapfuura, haina kupa mukana wekugovana kwayo kuchengetedza.
Zano rechitatu ndere 200GB ye € 2,99 pamwedzi. Nechirongwa ichi, taitogona kusarudza kuigovana nenhengo dzeboka reMhuri yedu.
Chekupedzisira, chirongwa chine chinzvimbo chikuru chekuchengetedza chine 2TB ye € 9,99 pamwedzi, uyezve, inotibvumidza kuigovana neboka redu.
Sekuona kwedu, chete 200GB uye 2TB zvirongwa ndizvo zvinotibvumidza kugovana yavo yekuchengetera neboka reMhuri yedu, iyo ichizviona kubva padivi rine zvibereko, zvingave zvisina musoro kugovana 5GB kana 50GB sezvo ari marongero ane zvishoma kuchengetedza.
Nzira yekugovana yako iCloud yekuchengetera neMhuri boka?
Chinhu chekutanga chatinofanira kunge takagadzirisa iboka Mumhuri, kuva nesarudzo yekugovana iCloud chengetedzo inogoneswa.
Tasimbisa danho iri, tinofanirwa kuenda kuchikamu "Gadzira Mhuri".
Tichingove ikoko, isu tichava nesarudzo yekugadzirisa kuchengetedza pamwe navo: ICloud kuchengetedza.
Kana tapinda, chiziviso chichaonekwa sekutanga kuita kweichi sevhisi, isu tinotevera matanho, tichiyeuka kuti isu tinofanirwa kuve nazvo ingangoita 200GB yekuchengetedza, Kana zvisiri, tinogona kuwedzera chirongwa chedu.
Kana izvi zvangoitwa, nhengo dzese dzeEn Familia boka redu rinokwanisa kunakidzwa nehurongwa hwasarudzwa.
Huwandu hwenhengo dzatinogona kugovana navo hurongwa hwedu hwekuchengetedza hwakaganhurwa, ndiko kuti, isu tine mashoma uye huwandu hwenhengo dzayo. Iyo nhamba yepasi yenhengo ndeye 2neko nhamba yepamusoro i6.
Iko hakuna nzira yekuziva kuti nhengo yega yega ichave nezvakawanda sei, ndiko kuti, nhengo dzese dzinoshandisa yakajairwa "jasi" 200GB kana 2TB, sezvakakodzera.
Otomatiki, Nhengo yega yega ichaziviswa neMeseji iwe wakawedzerwa kuboka iri uye chirongwa chako chinogadziriswa. Kana chero ivo vanga vatove nehurongwa hwekuchengetedza, vanozochinjaniswa kuti vagovane uye nekudaro mubhadharo wemwedzi wega wega unozoshanduka.
Kunyangwe kana iro boka ratoitwa uye kugovana chengetedzo, zvinogoneka gadzirisa chinzvimbo zvese zvinokura uye kuzvidzora, nguva dzose kubva kune imwechete manejimendi skrini
El kuchengetedza yenhengo yega yega iri zvakavanzika, saka hapana anogona kuona, kugadzirisa kana kudzima zvirimo zveimwe nhengo yeboka.
Nzira yekumira kugovana yako iCloud yekuchengetedza?
Zvakareruka sekuenda kune imwecheteyo skrini kumusoro uye bhatani rinozoonekwa rega kugovana. Isu tinongobaya pazviri uye kusimbisa sarudzo. Nenzira iyi, isu tichagumisa iyo yeMhuri yekugovana sarudzo.
Kana kunyangwe mushure mekuverenga chinyorwa uine kusahadzika kana mibvunzo nezvazvo, tinokukoka kuti utinyorere mune zvakataurwa kuti tikwanise kukubatsira nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mhuri kugovana iCloud kuchengetedza neIOS 11
Ini handirangariri kwandaiverenga, kuti semuenzaniso boka remhuri rinoitwa
ine nhengo nomwe dzese dzine 4gb mahara. Vanogona kuiswa pamwechete kuti vagadzire 5gb, chii chiri chokwadi mune izvi, nekuti izvozvi handisi kuwana kwandaiverenga.
Daniela Henao akadaro
mhoro, nekukanganisa ndakapa icloud yekugovana share uye ini ndoda kumira kugovana asi handizive kuti sei. Iwe unondidzidzisa?
Pindura Daniela Henao
Enda kuZvirongwa zveMhuri uye mumabasa akagovaniswa iwe unogona kuzvimisa.
Iyo Apple Watch Series 3 inokonzeresa nekuda kwekutadza kwekubatana kweLTE
Iyo iPhone X ichapa Samsung imwe mari kupfuura yayo yega Galaxy S8